Momba anay - Divenland
Orinasa simika matihanina izay manam-pahaizana manokana amin'ny vovobony redispersible (RDP) sy hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC), mpandraharaha mampihena ny rano ary zanakalahy on.With mihoatra ny 10 taona no niainany teo amin'ireo fampandrosoana sy famokarana vokatra ireo, Divenland dia hanolotra anao serivisy teknolojia matihanina. Tohanan'ny serivisy ara-barotra ara-teknika, Divenland koa dia iray amin'ireo orinasa avo lenta maoderina, izay namorona rafitra sy serivisy serivisy, manarona ireo fitaovana fanamboarana vovoka sy fitaovana fananganana vaovao, manome ny serivisy vokatra manokana sy mitambatra ary namboarina ho an'ny serivisy. mpanamboatra ambany.
Raha manatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra sy manitatra ny fahafaha-manao hamaly ny filan'ny mpanjifany manokana, dia faly koa i Divenland hanao OEM arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa, mba hanomezana tolotra fanohanana ho an'ireo orinasa na mpivarotra hafa .Divenland tsy hany safidinao, fa safidy iray feno fahendrena.Ny fananantsika ny kolontsaina sy ny filozofia, ary ataontsika sy ampiharana ny filôzofia.Commitment amin'ny kalitao dia iray amin'ireo soatoavintsika fototra. Ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny maha mpiara-miasa anay dia iray amin'ireo foto-kevitray. Manolotra serasera tsara izahay, manome vokatra avo lenta ary vahaolana tsara indrindra. Miaraha miasa amin'i Divenland, hanampy anao izahay hanao safidy tsara indrindra amin'ny akora misy vidiny mahafinaritra.
Ny antony nifidianan'ny orinasa maro
DIVENLAND tombony enina
TRANO FOTOTRA AN-TRANOMPOANA
Niara-niasa tamin'ny mpanjifa maro izahay tamin'ny sehatry ny faritra maro, ary mpanjifa an'arivony no nanatri-maso fa nitazona fifanakalozana ara-teknika sy fiaraha-miasa amin'ny oniversite any an-trano sy any ivelany isika nandritra ny taona maro, ary ny teknolojia dia nandroso hatrany ny indostria.
Miaraka amin'ny modely feno sy stock feno, ny hery miasa ho an'ny fiaraha-miasa matanjaka ary ny tsingerin'ny fanaterana haingana dia afaka miantoka ny famatsiana ara-potoana isika.
Ekipa teknika 3.
Izahay dia manana fanamafisana fenitra avo lenta amin'ny laboratoara ny vokatra vokatra, miaraka amina ekipa teknolojia za-draharaha maro, mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fivoaran'ny vokatra vaovao sy ny faritra vaovao amin'ny teknolojia fampiharana.
4. Serivisy asa fanompoana
Ny serivisy dia tsy vitan'ny manampy ny mpanjifa manadihady ny vokatra vita amin'ny fananganana ny olana, fa afaka manaiky ihany koa ny vokatra vita ho an'ny mpanjifa mba handefasana santionany amin'ny famakafakana, hahitana ny holon'ny olana ary mamaha ny olana.
Ny hevi-dehibe ao amin'ny orinasa dia ny "kalitao sy ny haitao", ny orinasam-pandraharahana fanta-daza sy mpanondrana ao an-toerana dia misafidy ny hiara-miasa, azo itokisana.
6. tanjaka mifototra
MISY FAHAFATESANA REHETRA
Mifantoka amin'ny sehatry ny vahaolana vita amin'ny fanamboarana vovoka maina, manamboatra rafitra mifehy tena kalitaon'ny vokatra tsara, fanamafisana ny kalitao vokatra, fanolorantena hamorona marika fanta-daza.